Buy House Rent in Shwe Hninsi (ID-1167) (30Lks) in Mayangone on ipivi.com
House Rent in Shwe Hninsi (ID-1167)
Active on site: 75 days
Views: 114 (+1)
2 Stories house for rent in Shwe Hninsi Street, Mayangone Township. Land area - 5200 sqft. House has Living-room, Two Master Bed-rooms, Three Single Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Fully furniture and five air-conditioners are already included.
Asking Price - 30 Lks (Nego)
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၇မိုင်ရှိ ငှားရန်ရှိသော နှစ်ထပ်လုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ပါသည်။ မြေအကျယ် - ၅၂၀၀ စတုရန်းပေရှိပါသည်။ လုံးချင်းအိမ်အတွင်း ဧည့်ခန်း၊အိပ်ခန်းကျယ် နှစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် သုံးခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ လေအေးပေးစက် ငါးလုံးနှင့် ပရိဘောဂအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အသင့်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ လုံးချင်းအိမ်၏ လစဉ်ငှားရမ်းခမှာ - သိန်း ၃၀ (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
ရွှေနှင်းဆီလမ်းရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် (ID-1167)
Name: House Rent in Shwe Hninsi (ID-1167)
Active on site 75 days